Herisetra any an-tsekoly : mpianatra feno mangana nokapihin’ny mpampianatra | NewsMada
Herisetra any an-tsekoly : mpianatra feno mangana nokapihin’ny mpampianatra
Mpianatra iray 6 taona mianatra amina sekoly tsy miankina iray ao anatin’ny Cisco Toamasina II no niharan’ny herisetran’ny mpampianatra azy araka ny loharanom-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Feno mangana ny fen’ilay zaza. Teo am-panasana azy no nahitan-dreniny ny nanjo an-janany io.
Nandefa iraka nanadihady ny eo anivon’ny Dren Atsinanana, vantany vao naheno ny fisian’io tranga io. Fantatra tamin’izany fa tsy manana fahazoan-dalana hisokatra akory io sekoly ianaran’ilay zaza io. Roa monja ny mpampianatra miasa ao.
Manohy ny famotorana ary efa miomana ny amin’ny fandraisana fepetra hentitra ny eo anivon’ny Dren Atsinanana satria voarara ny fikasihan-tanana ny mpianatra any an-tsekoly.
Mitamberina an-tsain’ny mpanara-baovao ny famonoana mpianatra nitranga tamina sekoly iray tetsy Anjanahary, tamin’ny taon-dasa. Niteraka resabe iny ary izao mbola misy mpampianatra sahy mikasi-tanana mpianatra izao indray.
Raha ny hevitry ny ray aman-dreny, betsaka ireo tsy mankasitraka ny fikasihan-tanana ny zanany na ho inona fahadisoana na ho inona tsy fahaizan’ilay ankizy any am-pianarana. Azo sokajiana ho herisetra ara-tsaina indrindra koa anefa ny levilevy sy ny latsalatsa ataon’ny mpampianatra ny mpianatra ary vao maika aza manimba ny sain’ny mpianatra izy ireny.
Misy ny ankizy tsy te hiverina an-tsekoly intsony rehefa tratran’ny fandrahonana ataon’ny mpampianatra azy na ny fanalam-baraka imason’ny iray kilasy amin’ny naoty ratsy na ny ditran-jaza any am-pianarana.